Home » Creative Writing » ပေသီး ဆိုသော ကလေးတစ်ယောက်
နိ က လည်းး ရေးးတတ်
ဖြစ်​ရပ်​မှန်​ကို လုပ်​ကြံဖန်​တီးပြီး ​ရေးထားတာပါ အစ်​မ​ရေ ??
အဲံဒါမျိုးတွေ ဖတ်ရရင် စိတ်မခိုင်ဘူး :'( :'(
ဘာဖြစ်​လို့လဲ ညီမ ရဲ့။
သနားတယ်လေ… အဲဒီလို ကလေးမျိုးတွေ.. အဲဒီလိုဘဝတွေ အရမ်းသနားတယ်..
ဒီလိုက​လေး​တွေ ကို အသုံးချ​နေတဲ့ အင်​မတန်​ ရက်​စက်​ယုတ်​မာတဲ့ လူ​တွေ အ​ကြောင်းနဲ့ အသုံးချခံက​လေး​တွေရဲ့ အလွန့်​အလွန်​ ​ကြေကွဲစရာ အဖြစ်​ဆိုး​တွေ အများကြီး ရှိပါ​သေး​ရော ညီမ​ရေ။
ပေသီး လို ကလေးမျိုး မြေတောင်မြှောက်ပေးမယ့် လူနဲ့ တွေ့ရင် အတော်ကြီး ထွန်းကားမှာ လို့ တွေးပြီး နှမြောမိတယ်။
ဟုတ်​တယ်​ ကိုဂျက်​ ရ…သူ့ အ​တွေးအ​ခေါ်​လေးက က​လေးနဲ့ မလိုက်​ဘူး။ ကျွန်​​တော်​တို့ မြို့မှာ ဒီလို လမ်း​ပျော်​က​လေး​တွေကို ကူညီ​နေတဲ့ ပရဟိတ အဖွဲ့​တွေရှိသလို ဒီက​လေး​တွေကို အသုံးချ​နေတဲ့ လူယုတ်​မာ​တွေလည်း ရှိသဗျ။
ကလေးတွေတော့… မဖတ်ကောင်း Rated R ပေါ့…။
သတ်တာဟာ.. မှားလား..မှန်လား.. အတွေးကိုသိချင်မိသား..
ကိုမာဝင်နေသူကို.. လူသေလို့သတ်မှတ်ရမှာလား… ဆိုတော့…
ကာယံကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း.. ဆူဆိုက်လုပ်ခွင့်(သတ်သေခွင့်) ပြည်နယ်တော်တော်များများမှ.. မရှိပါ..။
Donald Trump, Abortion Foe, Eyes ‘Punishment’ for Women …
အာ့ဆိုရင် ကျနော် ထင်မြင်ချက်ကတော့ အသက်ရှိသ၍ မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်။
ကိုယ် ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ရတာဆိုရင်တော့ လက်လျှော့လိုက်စေချင်တယ်။
အဟေး.. ရိတ်တင်း အာ ကွ.. သဂျီး သတ်မှတ်လိုက်ပြီ..။
အသက်ကို .. ဘယ်လိုသဘောထားကြသလဲ.. သိချင်လို့..။
Saving private ryan ထဲ မှာ တပ်သားလေး တစ်ယောက် အသက် နဲ့ အများ အသက် ကို လဲ ကြရ တာ တန် တယ် ထင်လား သူကြီး။
ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ စာထဲ ရေးထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ သူဂျီး။ အသက်ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုရင် လောလောဆယ် သိပ္ပံပညာမှာ အသက်ရဲ့ သရုပ်သကန်လောက်သာ သိပါသေးတယ်။ နောင်တော့ ဓာတ်ခွဲခန်းတွေမှာ လူဖန်တီးတဲ့ အသက်ကို လုပ်နိုင်မှာပါ။ အဲဒီအခါကျ ပိုသိမှာပေါ့။ အကြောင်းလုံလောက်ရင် (အထက်က သူဂျီး ဆိုခဲ့သလိုပေါ့နော) လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့အသက်သူ စီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသင့်တယ် ထင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရား စတဲ့ ရှုထောင့်တွေ အမျိုးမျိုးက ကြည့်ပြီး စဉ်းစား လို့ရှိရင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ လူမှုရေး ရှုထောင့် အမြင်က အငြင်းပွားဖွယ်ရာ တချို့ကို နောင် သိပ္ပံပညာက ဖြေရှင်းပေးသွားနိုင်လိမ့်မယ်။ ရှေး ကျောက်ခတ်လူသား တုန်းက အသက်ကြီးတဲ့ လူတွေကို စွန့်ပစ်ကြပါတယ်။ ဒီခေတ်အမြင်နဲ့ ရက်စက်ပေမဲ့ အဲဒီအချိန်က ရွေးစရာ ရှိဟန်မတူဘူး။ ယေဘုယျ အားဖြင့် မိမိအသက်ကို တန်ဖိုးထားသလို အခြားသတ္တဝါများရဲ့ အသက်ကို တန်ဖိုး ထားသင့်ပါတယ်။ နောင်တချိန်မှာတော့ ဆဲလ်ဥယျာဉ်မှာ အသားအမျိုးမျိုးရဲ့ ဆဲလ် တွေကို ပျိုးပြီး ရောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ (ဆဲလီဘရက်တီတွေရဲ့ အသားကိုတောင် တရားမဝင်ရောင်းစားဦးမယ် ထင်တယ်။ ဟီဟိ) ဝေဒနာပြင်းထန်တဲ့ လူတစ်ယောက် သက်သာရာရအောင်၊ လွတ်မြောက်သွားအောင် သူ့အသက် ကို ချုပ်ငြိမ်းသွားအောင် လုပ်ရမယ် ဆိုရင် ဘာသာရေးရှုထောင့်အရ အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားရှုထောင့်အရ ဆိုးတယ်လို့ မမြင်မိပါ။
Saving private ryan ထဲမှာပေးချင်တဲ့ message က… ဂျိမ်းရိုင်ယန်တယောက်မိုက်ရူးရဲပြီး ပြန်မလိုက်ပဲနေလိုက်တာကို.. သူတပ်ခွဲလေးနဲ့ သူပါအဆုံးခံပြီး.. ဆန္ဒပြည့်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့…ကက်ပတိန်ဂျွန်မေလာ ရဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ထင်ပါတယ်..။
ထူးဆန်းပါ​ပေ့ သူဂျီး​ရေ…အဲဒီ ဘီယာ ဘယ်​သူ​တွေများ ​သောက်​ကြပါ့?
အခုမှ ဝင်ဖတ်မိတယ်။ ထုံးစံ အတိုင်း လက်ရာကောင်း တစ်ပုဒ်ပါဘဲ မောင်ဘလှိုင်။
အဲဒီတော့ သူများ က ကြံရာပါလောက် အဆင့် ဘဲ ပေါ့။
ကိုယ့်စိတ် နဲ့ ဆိုရင်တော့ နာခြင်း ဒုက္ခကြီး ကို ရင်ဆိုင်နေရမဲ့ အစား နံရံရဲ့ တစ်ဖက် ကို သွားကြည့်တာက ပိုပြီး ကောင်းမလားပါဘဲ။
အရီးရဲ့ မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးပါ။ စစ်ကားထဲမှာတော့ ရိုင်ယန် ရဲ့အမေဟာ သားသုံးယောက်ကို ဆုံးရှုံးရပြီး ဖြစ်လို့ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ တစ်ယောက်ကို အမေဆီ ပြန်ပို့ဖို့ကြိုးစားတဲ့ အစိုးရရဲ့ လူမှုရေး ထောက်ထား ညှာတာမှုကို ကျန်တဲ့သူတွေက အသက်စွန့် လုပ်ရတာပါ။ မှန်တယ် မှားတယ် တော့ မပြောတတ်ဘူး။ နောက်အချက်တွေမှာ အရီးရဲ့ အမြင်နဲ့ ကျွန်တော့် အမြင် တူတယ်ပဲ ဆိုပါတော့။ ဝိပဿ နာ တရား အားထုတ်တာ အကျိုးရှိကြောင်း သိပ္ပံစမ်းသပ် တွေ့ရှိမှုတွေ အကြောင်း ဆောင်းပါးတွေ ဖတ်ဖူးတယ်။
ပိုက်ပိုက်တွေ အများးးးးးကြီးရှာထားတဲ့သူတွေကတော့..မသေခင်.. သေရင်ပါသမျှရအောင်ယူသွားမယ်ထင်တာပဲ..။
အသက်ကို.. ကွန်ပြူတာဒစ်ဂျစ်တွေလို.. သဘောထားမယ်ဆိုရင်.. အသိထိန်းပြီး ဘ၀ကူးသွားတယ်ဆိုတာထက်.. ဆေးအကူယူလိုက်တာက.. ပိုကောင်းလွယ်.. သက်သာမယ်ထင်မိတယ်..။
ဆိုင် ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင်)
ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ကျေးဇူးပါ အလင်းဆက်ရေ..
ကျွန်မ အထင်တော့ Saving private Ryan က စစ် ဟာမကောင်းကြောင်း ပြလိုတာလို့ မှတ်တာပါဘဲ။
ပေသီးလေး ကနေ ရိုင်ယန် ရောက်၊ အဲဒီကနေ အက်တ်လစ် ရိုဘော့လေး အကြောင်း ရောက်အောင် ဇာတ်တွေ ရှုပ်လိုက်မိသမို့ စောဒီးပါ မောင်ဘလှိုင်ရေ။